ZANU-PF oo xilka ka qaaday Mugabe iyo cadaadiska oo ku sii batay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta ZANU-PF oo xilka ka qaaday Mugabe iyo cadaadiska oo ku sii batay
ZANU-PF oo xilka ka qaaday Mugabe iyo cadaadiska oo ku sii batay
Kadib kulan ballaaran oo magaalada Haraare ee xaryunta Dalka Zimbabwe, ay ku yeesheen Xisbiga talada haya ee Zanu-PF ayaa waxaa ay xilka hoggaamiyaha xisbiga kaga qaadeen madaxweynaha cadaadiska uu kusii kordhayo ee dalkaasi Robert Mugabe .
Hogaamiyaha xisbigaasi ayaa loo magacaabay Emmerson Mnangagwa oo ahaa madaxweyne ku xigeenkii Dalka Zimbabwe,kaasi oo bishan aynu ku guda jirno ee November uu xilkii uga qaaday Roberta Mogaabe.
Mr. Emmerson Mnangagwa, ayaa waxaa xilka qaadista ka dib u cararay dalka dariska la ah Zimbabwe ee Koonfur Afrika (South Africa).
Waxaa la filayaa in dhowaan uu dalka kusoo laabto si uu u hogaamiyo xisbiga ZANU-PF.
Warbaahinta Caalamiga ah iyo kuwa dalka Zimbabwe ayaa waxaa ay ku waramayaan in Marwada koowaad ee dalkaasi Grace Mugabe laga qaaday dhammaan xilalka siyaasadeed ee dalkaasi.
Dabaal degyo waa wayn ayaa waxaa ay ka soconayaan caasimadda dalkaasi ee Harare kuwaasi oo ay dadwaynaha magaaladaasi ay kusoo dhowaynayaan tallaabada ay maanta oo Axad ah ay ku dhaqaaqeen xisbiga ZANUPF.
Qulqulatooyinka dalka Zimbabwe ayaa soo bilowday lixdii bishan xilligaasi oo madaxwayne Mugabe uu xilka ka qaaday madaxwayne ku xigeenkiisa.
Tallaabada xilka looga eryay Mr. Emmerson Mnangagwa, ayaa waxaa la rumaysan yahay inay ka dambaysay Grace Mugabe.
Madaxwayne Mugabe ayaa xilka qaadista Emmerson Mnangagwa waxaa uu Ku sheegay in uu u gefay oo uu Ku yiri “Goormeed dhimanaysaa”.
Mugabe ayaa diidan inuu xilka ka dego, waxaana socda dadaalo Caalami ah oo looga dhaadhicinayo Mugabe inuu xilka ka dago.
Madaxwaynaha dalka Koonfur Afrika Jakab Zuma ayaa madaxda gobalkaasi kala hadlaya xal u helidda mushkiladda dalka Zimbabwe kasoo cusboonaaday.
Hadii uu ku adkaysto inuusan xilka ka dagin waxaa uu wajihi karaa xilka qaadis toos ah oo Baarlamaanka dalkaasi kaga yimaada.
Waxaa lagu waramay in madaxwayne Mugabe uu lumiyay dhammaan kalsoonida xisbigiisa ZANU-PF, waxaana fudad in Baarlamaanka uu kalsoonida kala laabto bacdamaa aysan jirin xubno ku filan ee isaga difaaca.
Robert Mugabe, ayaa ah madaxwayne 93 sano jir ah kaasi oo talada dalkaasi Zimbabwe haya ku dhowaad 40 sano waana hogaamiyaha ugu waqtiga dheer ee Caalamka.
Waa madaxwayne cod kar ah oo lagu xasuusto dagaalka afka ah ee uu mar walba ku haayay reer galbeedka, ku darsa ee waa nin qaaradda Afrika guud ahaan looga arko halyay wadankiisa ka xureeyay gumaystihii Ingiriiska, isagoo hantidii dhuleed ee dadka caddaanka ahaa ku wareejiyay dadka Madow ee dalkaasi iska leh.
Waxaa uu sidoo kale leeyahay taariikh aan wanaagsanayn, bacdamaa dalka uu galiyay mushkilad adag, waxaana muddada uu xilka hayo la sheegaa in uu caburiyay dadka islamarkaana ay jiraan dad ku maqan maamulkiisa.
Previous articleTillerson, African Foreign Ministers Talk Trade, Good Governance, Security
Next articleMadaxwaynaha Soomaaliya oo gaaray dalka Imaaraadka Carabta (Sawiro)